I-china QF-JX-300 China ICU Medical Separate Bridge Pendant yabenzi bezibhedlela nabaphakeli | I-Wanyu
I-Medical Bridge Pendant
Lesi sikhonkwane sebhuloho lezokwelapha singakhiwa ngezindlela ezimbili, isigaba esomile nesigaba esimanzi sihlanganiswe ndawonye noma sihlukaniswe.
Ingxenye emanzi ifakwe ipulatifomu yensimbi enezingqimba eziningi. Inomshini wepompo wesirinji kanye nenduku yepompo yokumnika. Ingxenye eyomile ifakwe ipulatifomu yensimbi enezingqimba eziningi futhi ukuphakama kwamakhabethe kuyashintsha.
Igesi yezokwelapha, ukuncela, ukunikezwa kwamandla kanye namatheminali wokukhishwa kwenethiwekhi ngokulandelana kulungiselelwe ezingxenyeni ezomile nezimanzi lapho abasebenzi bezokwelapha bengakwazi ukufinyelela khona.
1. Igumbi Labagula Ngokujulile
2. AmaWadi Aphelele
3. Igumbi Lokutakula
1. Izinto ezinamandla amakhulu
Ibhuloho lenziwe ngezinto ezinamandla amakhulu ze-aluminium alloy. Inamandla aqinile wokuthwala.
2.Isilayidi Sesitimela Esishelelayo
Ukwakheka kwesitimela okushelelayo kwenza ukunyakaza kombhoshongo kube lula kakhudlwana, futhi kwenza nabasebenzi bezokwelapha bonge kakhulu umsebenzi.
3. Umbani we-LED othambile
Imithombo yokukhanyisa ye-LED ihlelwe emishayweni yebhande lezokwelapha elihlinzeka ngendawo enhle yokusebenza yabasebenzi bezokwelapha.
4. Isakhiwo Modular
Umklamo wesakhiwo se-Modular ungahlangabezana nezidingo zokuthuthukisa ezizayo futhi kube lula ukugcinwa.
5. Idizayini Yokuhlukaniswa Kukagesi-kagesi
Idizayini yokuhlukanisa igesi nogesi iqinisekisa ukusetshenziswa okuphephile.
Intambo kagesi nepayipi lokuhambisa umoya ngeke lisonteke noma liwe ngengozi ngenxa yokujikeleza okulengayo.
6. Izitolo Zikagesi Ezihlala Njalo
Umbala ohlukile nokuma kwe-interface yegesi ukuvimbela ukuxhumana okungalungile. Ukufakwa uphawu kwesibili, amazwe amathathu (avuliwe, avaliwe, futhi akhishwe), izikhathi ezingaphezu kwezi-20 000 zokuzisebenzisa. Ingagcinwa ngaphandle komoya.
Ubude bebhuloho: 2200-3200mm
Ubude obuhambayo bendawo eyomile: 550mm
Ubude obuhambayo bendawo emanzi: 550mm
I-engeli yokujikeleza yendawo eyomile: 350 °
I-engeli yokujikeleza yendawo emanzi: 350 °
Ukunikeza Amandla ebhuloho: 600kgs
Ukuthwala Amandla endawo eyomile: 280kgs
Ukunikeza Amandla endawo emanzi: 280kgs
Umshini Outlet negesi
Isirinji Pump Combinat rack
Langaphambilini Uhlobo Lokufaka lwe-LEDD700 I-LED Single Arm Operation Light ngekhamera yevidiyo
Olandelayo: I-TS-DQ-100 Double Arm Electrical Medical Endoscopic Pendant evela eFektri
I-ZD-100 ICU I-Pendant Yezokwelapha Esetshenzisiwe ye-Hos ...